Somaliland Oo Lumisay Dawladnimadii Ay Ku Naalooneysey Oo Dib Ugu Noqotay Gobolnimo Somalia Ka Mida. – somalilandtoday.com
Somaliland Oo Lumisay Dawladnimadii Ay Ku Naalooneysey Oo Dib Ugu Noqotay Gobolnimo Somalia Ka Mida.
Akhristeyaashayda sharafta leh, waan ka xumahay annaga, maxaa yeelay waxaan luminay madax-banaanida xornimadeena markii uu Kulmiye yimi. Rumeyso ama ha rumeysan. Hadda Somaliland waa mid ka mid ah gobollada federaalka somalia, sida Puntland, Jubaland, Galmudug iyo wixii la mid ah. Maalintii ugu dambaysay ee aynu ka lumannay madaxbannaanida Somaliland, waxay ahayd wakhtigii madaxweynaha R.Honourable, Mr Dahir Riyale Kahin uu ku wareejiyay ninka da’da weyn, oo aanu ugu yeedhno Siilaanyo. Waxay ahayd maalin madow ah kuwa geesiyaasha ah, kuwaas oo dhiigooda iska daadiyey iyada oo xajiinaya. I.e Maxamed Cali (PUH), Mohamed Hashi ( Lixle PUH).
iyo kuwa ugu yar ee weli ku nool hareeraha aan qarsooneyn , Sida Mr RH Ibrahim Dhega-weyne & RH Ahmed Mire iyo dad badan oo ku ordaaya waddooyinka qaawan, inta ay jiran yihiin ama waalan, kuwa kale waxay ku xirnaayeen silsilado bir ah meelo khaas ah
Qaar koodna waxay ku dhinteen gaajo, wax badan oo iyaga ka mid ah ayaa six un udhaawacmay oo ay haystaan xabado kala duwan oo qaybo kale duwan oo jidhkooda ah daacad u ah ilaahay qaadirka ah
(Xaqiiqda Creator of Universe), waxaan runtii ooyaa markaan dib u fiiriyo oo aan xusuusto dad-kayaga aan waxba galabsan, kuwaas oo ku dhuftay duruufo adagi waxbana aan geysan. Ma jiraan wax marmarsiiyo ah had iyo jeer, si ay u noqdaan xaaladahan adag. Askariga ku fadhiya kursiga (midka aad ugu yeedhayso Biixi), maaha madaxweyne, laakiin wuxuu joogaa Hargeysa, maxaa yeelay wuxuu dhab ahaantii yahay guddoomiye Gobol oo ka wakiil ah Greater Somaliya, sida Morgan (oo ah gabadha Baaskiilka Bare ) taasi waa jagadiisa dhabta ah, uguma yeechi karno madaxweyne, sababtoo ah isaga oo aan u qalmin in loo magacaabo madaxweyne, inuu cadeeyo arimaha muranku ka joogo. fadlan akhri qodobbada soo socda ee hoose: Haddii aad ogtahay ama aanad ilayn. Ra’iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed, wuxuu tagay Muqdishu 17-kii June / Juun / 2018Hilibkii uu ka soo qaatay Mareexan Clan Mr Cheese (waxaad ugu yeedhaan farmaajo), waxay ku dhawaaqeen oo saxeexeen 16 dhibcood dhamaadka kulankooda. Waxaan mar kale ka xumahay dadka reer Somaliland, inay maqlaan 5 ka mid ah 16ka qodob ee kor ku xusan ee ku saabsan sawirka rasmiga ah ee Somaliland:
(1) Itoobiya waa in la ogaataa in Somaliland ay qayb ka tahay gobollada Woqooyiga Soomaaliya. Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa aqbalay.
(2) Somaliland maaha waddan madax bannaan.
(3) Heshiiska ama wax kasta oo ay ka doonayaan Itoobiyaanka Somaliland, waa in laga saxeexaa madaxweynayaasha Somaliya ama ra’iisul wasaare.
(4) Itoobiya waa in ay isla markiiba joojiso iskaashigeeda iyada oo go’aankeeda ay Somaliland ku doonayso inay ka madax bannaanaato Greater Somalia.
(5) Askariga Hargeisa (Biixi) ma aha madaxweyne, laakiin waa koox gooni u goosan, oo raba inay ka iibiyaan gobolkaan adduunka, si ay u soo ururiyaan tuugo doollar oo uu u leeyahay jeegaantu, isaga oo ah ilaaliye (Siilaanyo)
ka hor markii uu yimid awoodda waqooyiga. Sidaa darteed, ma waxa aad sheegi kartaa hadda Xaaladda Somalilan? Ma waxaan nahay gobol madaxbannaan ama mid aan ahayn? Fikradayda, waxaanu nahay qayb ka mid ah Soomaaliya, haddii aad jeclaan lahayd iyo haddii kaleba, Taasi waa xaaladeena. Maamulkan maafiyada kulmiye wuxuu Somaliland ku qabsaday go On, waana naga dhintay sida qof dhintay, oo waligiisna kuma soo noqonaayo dhulku.
Waxaa qoray: – A.J.AHMED. (USI-SHOTALY)